Ogaden News Agency (ONA) – Madaxa Haya’adda Daryeelka Agoonta GA oo booqasho hawleed ku yimid Qatar
Madaxa Haya’adda Daryeelka Agoonta GA oo booqasho hawleed ku yimid Qatar
Posted by ONA Admin	/ September 17, 2012
Waxaa maalmihii la soo dhaafay booqasho hawleed oo laba maalmood qaadatay ku yimid dalka Qatar madaxa Haya’adda Daryeelka Agoonta Dr. cabdiraxmaan. Intuu joogay Qatar wuxuu madaxa haya’adda daryeelka Agoonta u gudbiyay haya’adaha samafalka ee dalkan waraaqo iyo dukumentiyo ka xogwaramaya hawlaha ay qabateen haya’adiisa iyo baahida aan la soo koobi karin ee hortaala.
Waxaa kaloo uu madaxa Haya’adda kulamo kala duwan la qaatay maamulka jaaliyadda iyo ururka dhalinyarada OYSU/Qatar isagoo uga xogwaramay arima quseeya daryeelka agoonta iyo baahidooda. Wuxuu Dr. Cabdiraxmaan si fiican uga xogwaramay faa’iidada ku jirta daryeelka agoonta aduun iyo aakhiraba isagoo ka warbixiyay jaaliyadaha gacanta fiican ka gaysta daryeelka agoonta ee masuuliyaddaa saaran ka soo baxay, isagoo sheegay daryeelka agoonta inay tahay masuuliyad saaran dhamaan bulshada S.Ogadenya gaar ahaan jaaliyadaha.
Wuxuu ku baraabujiyay Dr. cabdiraxmaan jaaliyadda Qatar inay si gooni ah xil isaga saaraan arinta agoonta oo qofwalba wuxuu heli karo uu bishii ugu deeqo agoonta; “Halka Doolar wax weyn ayuu u tarayaa agoonta ee hayareysanina” ayuu yidhi Dr. Cabdiraxmaan.
Ugu dambayntii waxay jaaliyadda Qatar go’aansadeen inay dhigaal u sameeyaan agoonta, sidoo kale inay hirgaliyaan codsiga Dr. cabdiraxmaan dheere oo loo dhigo guryaha doonaya inay helaan barakada agoonta koobab loogu rido sarifka soo hadha iyo wixii kalee la awoodo. Taasoo uu ku baraarujinayo madaxa Daryeelka Agoonta inay dhamaan jaaliyadaha u sameeyaan si caruurta soo koreysa xataa loogu baraarujiyo oo loo fahamsiiyo inay jiraan caruur la dhalatay oo agoon ah oo u baahan inay gacan siiyaan; “Waxay arintaasi ku barbaarin caruurta inay yeeshaan dareen iyo deeqsinimo.” ayuu yidhi Dr. C/raxmaan.